“नेपाली तेक्वान्दोमा बजेटको अभाव,” मास्टर दिल गुरुङ « KhelkudNews.com
“नेपाली तेक्वान्दोमा बजेटको अभाव,” मास्टर दिल गुरुङ
Published On : 17 August, 2019 6:25 am
मास्टर दिल बहादुर गुरुङ । कास्कीका गुरुङ विगत २० वर्ष देखि हङकङमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । छैटौँ डानका युनिटी तेक्वान्दो एकेडेमीका संस्थापक तथा प्रमुख गुरुङ नेपाली तेक्वान्दोको विकासमा समेत त्यत्तिकै सहयोगी मानिन्छन् । उनलाई दुई साता लामो नेपाल बसाइको क्रममा काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घ र नेप्लीज तेक्वान्दो एकेडेमीले सम्मान पनि गरे । तीनै गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सार सङ्क्षेप
तपाईँ सुरुमा कसरी हङकङ पुग्नु भयो ?
मेरो श्रीमती सासा आइडी कार्ड भएका कारण म पनि हङकङ पुगेको हुँ ।
त्यहाँ कसरी तेक्वान्दाको गतिविधि सुरु गर्नु भयो ?
प पहिला सिङ्गापुरमा थिए । त्यही रहँदा मैले तेक्वान्दो सुरु गरे । सिङ्गापुरबाट सुरु गरेको तेक्वान्दोको यात्रालाई हङकङमा निरन्तरता दिएँ । सन् २०१० मा म चौथो डान भइसकेको थिएँ । । अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर पनि भइसकेको थिएँ । । यही समयमा मैले प्रशिक्षकको यात्रा सुरु गर्ने क्रममा यो एकेडेमीको स्थापना गरे । यसै एकेडेमीले अहिले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छु । यसमा म सन्तुष्ट पनि छु ।
अहिलेसम्म जम्मा कत्ति जना खेलाडी उत्पादन भए ?
यसको ठ्याक्क हिसाब गर्न कठिन छ । किनकि यस बिचमा आउने र जाने क्रम जारी नै रह्यो । तर, एकेडेमीमा २ सय ५० भन्दा बढी खेलाडी सधैनै रहेका छन् । १० वटा यसका शाखा छन् । यी मध्यका कुनैमा धेरै तथा कुनैमा थोरै रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै नेपाली, इन्डोनेसियाली र फीलीपानो रहेका छन् । भारत, पाकिस्तानी, चाइनिज र युरोपेलीहरु पनि रहने गरेका छन् ।
एकेडेमीको अहिलेसम्मका उल्लेख्य प्रदर्शनहरू के के हुन् नि ?
प्रत्येक दुई चार महिनामा प्रतियोगिता हुन्छ । यी मध्य केहीमा टिम च्याम्पियन भएका छौ । व्यक्तिगत पदक पनि हाम्रो खेलाडीले जिती रहेका छन् । त्यहाँको एसोसिएसनले आयोजना गरेको अफीसीयल राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन । त्यो भन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भने हामी सहभागी हुन्छौ । त्यहीँको स्थानीय खेलमा हामी निरन्तर सहभागी हुन्छौ ।
त्यहाँको अफीसीयल खेलमा सहभागी हुन नपाउँदा त्यहाँका नेपाली खेलाडीलाई केही अप्ठेरो हुँदैन ?
अहिलेसम्म भएको छैन । थुप्रै आमन्त्रण खेलमा हामीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । हामीले अहिलेसम्म ठुला अफीसीयल प्रतियोगितामा चासो दिएका छैनौ । गत राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएन टिमको सहभागिता रहेको थियो । यसको मतलब के हो भने नेपाल बाहिर रहे पनि नेपालका जो कोहीलाई नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खुला भएको हो । यसका लागि क्षमता र इच्छा भने चाहियो ।
नेपाली तेक्वान्दोमा तपाइको सहयोग चाहिँ कस्तो छ ?
हामी विदेशमा रहे पनि हाम्रो जानकारी रहेको र आशा लाग्दा खेलाडीलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौ । हामीले सहयोग गरेका खेलाडी र डोजाङले नतिजा पनि राम्रो दिइरहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो समयको खराब नतिजा कारण के होला ?
त्यसको मूल कारण आर्थिक कारण हो । यो समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो बजेट चाहियो । हामीले व्यक्तिगत सहयोग गरेका छौ । सरकारले केही बढाइ दिएमा यसले उपकरणमा सहजता हुनुका साथै खेलाडीको मनोबलमा वृद्धि हुन्थ्यो । यसले हामीलाई सही बाटोमा लैजान सक्थ्यो ।
अन्त्यमा तपाइको भन्नु ?
नेपालले अहिलेको भन्दा आगामी दिनमा राम्रो परिणाम लेराओस । यसमा सङ्घ गम्भीर होस भन्ने चाहना हो । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौ ।